विषादी सेवनले दाजुको मृत्यु, भाइ आइसियुमा
राजकरण महतो सोमवार, कात्तिक २७, २०७४ 3521 पटक पढिएको
बर्दिबास: विषादी सेवनले महोत्तरीमा दाजुको मृत्यु भएको छ भने भाइ गम्भीर घाइते भएका छन्। सडकमा फ्याकेको प्याकेटभित्रको विषादीलाई खानेकुरा सम्झेर खाएपछि आइतबार साँझ दुई बालक गम्भीर घाइते भएका थिए।
गौशाला नगरपालिका-८ बेलगाछीका रामविलाश ठाकुरका ५ वर्षीय छोरा उद्धव ठाकुर र अढाई वर्षीय उदितकुमार ठाकुरको अवस्था गम्भीर भएपछि जनकपुर अञ्चल अस्पताल लगिएको थियो। उपचारका क्रममा उद्धवको मृत्यु भएको गौशालाका स्थानीय संचारकर्मी दिनेश महताले बताए। उदितको अवस्था पनि गम्भीर रहेको छ। उनलाई आईसियूमा राखेर उपचार भइरहेको छ।
‘दुई बालक बिष सेवन गरेको खवर पाउना साथ हाम्रा प्रहरीको टोली घटनास्थल पुग्यो। त्यहाँ (घटनास्थलमा) थुप्रै प्लाष्टिकको खाली प्याकेटहरु भेटियो', इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाका प्रहरी निरीक्षक भोला भट्टले भने, ‘जसमा एउटा थाईमेट नामक विषादीको खाली प्याकेट समेत भेटियो। बच्चाहरुले सोही विषादीको प्याकेटभित्र रहेको थाईमेट सेवन गरेको हुनुपर्छ।'
स्थानीय मनु साहका अनुसार बिष सेवनले बालकहरु छटपटिदै निरन्तर उल्टी गर्न थालेपछि स्वास्थ्यचौकी लगिएको थियो। तर स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा चिकिस्तक नभएपछि जनकपुर पठाइएको थियो। त्यहाँबाट पनि बिरामीलाई बिराटनगर रिफर गरिएको स्थानीयले बताए।
आइतवार, कात्तिक २६, २०७४ ९ हजार विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलावाड !
मतदातालाई ओलीको पत्र : ‘अबको ५ वर्ष वामपन्थीलाई परीक्षण गर्नुहोस्' 4900
गृहमन्त्री खोइ ? 3204
अनेक प्रश्नमा कांग्रेस 179
गफले होइन, कामले समृद्धि ! 91
कथित कम्युनिस्ट अधिनायकवाद 219
‘भिजन सिन्ड्रोम'को बढ्दो समस्या 330
इटहरी उपमहानगरका फाइल अख्तियारको कब्जामा 1307
प्रचण्ड रौतहट बम काण्डका घाइते आमा छोरा भेट्न अस्पतालमा 8848
केशव स्थापितविरुद्ध घुस मुद्दा 14534